ပံ့သကူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Interviews & Profiles » ပံ့သကူ
Posted by Mon Lay on Nov 29, 2020 in Interviews & Profiles, Literature/Books |0comments
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့မှာ ပံ့သကူအလှူလေး လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပံ့သကူဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ လူတို့စွန့်လွတ်လိုက်သောဝတ္ထုပစ္စည်း(သို့) ပိုင်ရှင်မရှိတော့သော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းလို့ဆိုရင် ပိုမိုနားလည်လွယ်ပါလိမ့်မယ်။.လမ်းဆုံလမ်းခွတွေ လူသူလေးပါး အသွားအလာများတဲ့ နေရာတွေမှာ မနက်အစောကြီး(ကျီးမနိုးခင်)ထပြီး မည်သူမျှမမြင်အောင် ငွေ/ပစ္စည်း တခုခုကို ပစ်ချ ထားခဲ့ရမယ်…ဒီလို ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်…. ပြုလုပ်သူမှာလည်း ငွေကြေးဥစ္စာတွေ တိုးပွားလာလိမ့်မယ်
ပံ့သကူပစ်ခြင်းအစ…. အခါတစ်ပါးမှာ… #အရှင်အနုရုဒ္ဓါမထေရ်မြတ်ကြီး…ဟာ ဝတ်ရုံထားတဲ့ သင်္ကန်းက အတော်ဟောင်းနွမ်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်… အမှိုက်ပုံတွေမှာ…ပံ့သကူအဝတ် အရှာထွက်ခဲ့ပါတယ်…. ((((တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဘဲ…ထိုနေ့ဟာလည်း #တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ရဲ့နံနက်အစောပိုင်း အချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်…..)))) ဒါကို…ကြိုတင်သိမြင်နေခဲ့တဲ့…. ဘဝဟောင်းတုန်းကဇနီးမယားတော်စပ်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်သော #ဇာလိနီနတ်သမီး…..ဟာ…. သူကိုယ်တိုင်လှူတန်းရင်(နတ်ဝတ်တန်ဆာတွေမို့) မထေရ်ကြီးက အလှူမခံမှာကို သိတဲ့အတွက်…. မထေရ်ကြီးရောက်ရှိလာမယ့် အမှိုက်ပုံအနီးနားမှာ… နတ်အဝတ်၃ထည်ကို မသိမသာ စွန့်ပစ်လှူထားခဲ့ရာကနေ စပြီး…. ပံသကူပစ်ခြင်းဓလေ့ အစပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ကျမ်းအချို့မှာ ပြဆိုထားပါတယ်….. ဒါ့ကြောင့်… #ပံ့သကူအစဇာလိနီက….လို့တောင် ဆိုစမှတ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်လို့….အသိပေးလိုက်ပါတယ်။။
မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းဖို့ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့တော့ မပစ်ပါနဲ့…အဲဒီလိုစိတ်နဲ့ပစ်ရင်တော့… ထားရှိတဲ့စိတ်က အကြောင်းမမှန်တာကြောင့် အကျိုးပေးလည်းမသန်တော့ပါဘူး…. အယုတ်အလတ်အမြတ်မရွေး မိမိပေးလှူတဲ့ ပံ့သကူကြောင့် ရရှိသွားကြသူတို့ အဆင်ပြေကြပါစေ ဝမ်းမြောက်ကြည်နူးပျော်ရွှင်ကြပါစေဆိုတဲ့…. ကုသိုလ်စေတနာစိတ်မျိုးနဲ့သာ ပေးလှူပါမှ ပံသကူအစစ်လည်းဖြစ်ပြီး အကျိုးလည်းကြီးစွာပေးပါလိမ့်မယ်
((မှတ်ချက်။ ။ ပံသကူမှန်းသိအောင်ပစ္စည်းမှာ #ပံ့သကူလို့စာရေးသားချိတ်ဆွဲထားကြစေလိုပါတယ် #တတ်နိုင်သူတွေကလေးနေရာလောက်ကို #ပံ့သကူပစ်ကြပါများများပစ်လေကောင်းလေပါဘဲ)))) (((ပစ်တဲ့အခါမှာ…. ငွေဆိုလည်း…၁၀၀၀/၅၀၀၀/၁၀၀၀၀/၁၀၀၀၀၀ စသည်ဖြင့် မိမိတတ်စွမ်းသလို….. အဝတ်အထည်ဆိုလည်း…. လတ်ဆတ်သစ်လွင်သောအဝတ်အထည်မျိုး….. စသည်ဖြင့် ဖြစ်ကြစေလိုပါတယ်….ဒါမှ အကျိုးပိုကြီးမှာ ဖြစ်ပါကြောင်းနဲ့….ငွေနဲ့အတူ အဝတ်အထည်လည်း မပါမဖြစ်ပါရပါမယ်လို့….ပြောပါရစေ))))
Mon Lay has written 473 post in this Website..